နယ်သာလန်က ဒီဇင်ဘာ ကြားနာပွဲ မြန်မာဘာတွေ ရင်ဆိုင်ရဖို့ ရှိလဲ
နယ်သာလန်က ဒီဇင်ဘာ ကြားနာပွဲ မြန်မာဘာတွေ ရင်ဆိုင်ရဖ...
28 พ.ย. 2562 - 23:18 น.
ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ စတင် ကြားနာမှု လုပ်မယ်။
အဲဒီမှာ ICJ ကို ဂမ်ဘီယာ ဘက် ကတောင်းထားတာ နှစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ အကြမ်းဖက်မှု သတ်ဖြတ်မှုတွေရှိရင် ဆက်မလုပ်ဖို့ နဲ့ ဒုတိယ အချက် ကတော့ သက်သေ အထောက်အထားတွေကို မဖျက်ဆီးဘဲ ထိမ်းသိန်းထားဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ Harvard Law School မှာ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ ကထိက ဒေါ် ရည်မွန်ထွန်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
အရပ်သားတွေ အပေါ် ပစ်မှတ်ထားတဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေ အားလုံး မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ချက်ခြင်းရပ်ရေး အရေးပေါ် တားဆီးမိန့် တစ်ရပ် ICJ ဘက်က ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ ဂမ်ဘီယာက ထည့်သွင်း လျှောက်ထားခဲ့တာကို ဒီဇင်ဘာ ကြားနာမှုတွေထဲ ICJ က အဓိက အာရုံစိုက် ကြားနာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲ တွေ့ရပါတယ်။
တရားသူကြီးတွေက ဂမ်ဘီယာဘက်က တင်တာတွေကို ဘာကြောင့်တင်တာတာလဲဆိုတာကို နားထောင်မယ်၊ မြန်မာဘက်က ဒီဟာကို လက်မခံဘူးဆိုရင် ဘာကြောင့် လက်မခံဘူး ဆိုတာကိုလည်း နားထောင်မယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ပေးသင့်တယ်ထင်ရင် ပေးလိမ့်မယ်လို့လည်း ဒေါ် ရည်မွန်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
အဲဒီ့ ကြားဖြတ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ဟာက ရက်ပိုင်းဖြစ်နိုင်သလို လနဲ့ချီကြာနိုင်ပြီးတော့ တကယ် အမှု ကြီးဖြစ်တဲ့ ဂျီနိုဆိုက် ကွန်ဗင်းရှင်းကို မြန်မာ ချိုးဖောက်သလား ဆိုတာကို စစ်ဆေးတာ ကတော့ နှစ်နဲ့ချီကြာလိမ့်မယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
အဲဒီ ဒီဇင်ဘာ ကြားနာမှု ၃ ရက် အတွင်းမှာ ဂမ်ဘီယာရော မြန်မာပါ၊ ICJ ရုံးစိုက်ရာ နယ်သာလန် နိုင်ငံ သဟေ့ဂ်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနန်းတော် the Peace Palace ရုံး အဆောက်အအုံမှာ လာရောက် ထွက်ဆိုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
OIC ကိုယ်စား ဂမ်ဘီယာက မြန်မာနိုင်ငံကို တရားစွဲတဲ့သူ အဘူဘာကာ တမ်ဘာဒူး
ဂမ်ဘီယာဘက်က ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက်ရှာဖွေရေး မစ်ရှင်က တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ ဂြိုဟ်တုကရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို တင်ဖို့ရှိပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာဘက်ကတင်မယ့် ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက်ရှာဖွေရေး မစ်ရှင်က တွေ့ရှိချက် အချက်အလက်တွေကို မြန်မာက ငြင်းပယ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်က လက်ခံထားလို့ တရားရုံးက အလေးအနက်ထားဖို့ ရှိနိုင်တယ်လို့လည်း ဒေါ်ရည်မွန်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
မြန်မာဘက်ကလည်း မြန်မာအစိုးရရဲ့ မူဝါဒတွေ အထောက်အထားတွေ ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြန်လည်တင်ပြလို့ ရနိုင်တယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
ဂျီနိုဆိုက် ကွန်ဗင်းရှင်းလို့ ခေါ်တဲ့ လူမျိုးပြုန်းတီးစေမှု တားဆီးရေးနဲ့ အပြစ်ပေး အရေးယူရေး ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ပဋိညာဉ်ကို မြန်မာ အနေနဲ့ ဝင်ပြီး လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ အချိန်က စလို့ ဒီနေ့အထိ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ် ဆိုပြီး မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဌာနက နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ နိုင်ငံတကာ တရားရုံး ICJ မှာ ရိုဟင်ဂျာ အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂမ်ဘီယာက မြန်မာကို တရားစွဲထားတာကို တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အရေး ကိစ္စဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး သွေးစည်း ညီညွတ်ကြပါ ဆိုပြီး အဲဒီ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဂမ်ဘီယာစွဲတဲ့ ဂျီနိုဆိုက်ဆိုတာကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်သလဲ
ဂျီနိုဆိုက် ကွန်ဗင်းရှင်းလို့ ခေါ်တဲ့ လူမျိုးပြုန်းတီးစေမှု တားဆီးရေးက တကမ္ဘာလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီအချက်ကို လိုက်နာပါမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။
လူမျိုးတစ်မျိုးလုံး ပြုန်းအောင် သတ်ဖြတ်မှု တခုတည်းက ဂျီနိုဆိုက် မဟုတ်ပါဘူ၊ လူမျိုးထဲက အရေအတွက်တချို့ကို သတ်ဖြတ်မှုကလည်း ဂျီနိုဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ ဒေါ်ရည်မွန်ထွန်းက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
၁။ အဖွဲ့အစည်း လူမျိုးတစ်မျိုး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ရဲ့ လူတချို့ကို သတ်ရင်
၃။ တမင်သက်သက်သိလျက်သားနဲ့ အဲဒီလူမျိုးအစုဖွဲ့ တွေ ဘဝရပ်တည်ရေးကို ခက်ခဲအောင်လုပ်ထားရင်၊ ဘဝထူထောင်လို့ ရအောင် မလုပ်ရင်
စတဲ့အချက်တွေက ဂျီနိုဆိုက် ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဒေါ်ရည်မွန်ထွန်းကပြောပါတယ် ။
အဲဒီသတ်မှတ်ချက်ထဲက အချက်အလက်အချို့ ငြိတာနဲ့ ဂျီနိုဆိုက် ကွန်ဗင်းရှင်းလို့ ခေါ်တဲ့ လူမျိုးပြုန်းတီးစေမှုကို တားဆီးရေးချိုးဖောက်တယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်လို့ ဒေါ်ရည်မွန်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတကာတရားရုံး (ICJ) ဟာ နိုင်ငံအချင်းချင်းကြား ဖြစ်တဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေကို ဖြေရှင်းပေးရတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အဓိက တရားရေးအဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ထွက်လာမယ့် ကြားဖြတ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု အနိုင်အရှုံး ရလဒ်ဟာ ရက်ပိုင်း၊လပိုင်းအတွင်းလည်း ထွက်လေ့ရှိပါတယ်။ အမှုကြီးကတော့နှစ်နဲ့ ချီပြီးကြာလေ့ရှိတယ်လို့ လည်းဒေါ်ရည်မွန်ထွန်းကပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ နယ်သာလန်က ဒီဇင်ဘာ ကြားနာပွဲ မြန်မာဘာတွေ ရင်ဆိုင်ရဖို့ ရှိလဲ